Guddiga arrimaha caymiska oo maanta hindiseyaal soo bandhigaya iyo Vänsterpartiet oo saluugsan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Guddiga arrimaha caymiska oo maanta hindiseyaal soo bandhigaya iyo Vänsterpartiet oo saluugsan
La daabacay måndag 2 mars 2015 kl 12.43
Maanta guddi baarlamaanka u qaabilsan arrimaha caymiska bulshada ayaa soo bandhigay hindiseyaal kun sabsan sida ay mustaqbalka noqonayaan caymisyada shaqo la’aanta iyo jirrada.
Sida uu telefishinka SVT wariyey dhamaadkii todobaadka la soo dhaafay waxaa isbadal lagu sameynayaa waqtiga caymiska jirrada uu qofka qaadan karo. Maanta waqtiga uu qofka heli karo caymis jirro waa ugu badnaan 2,5 sanno. Sidaasna waxaa ka dhigay sannadkii 2008dii xukumaddii hore ee Alliansen.
Laakiin xisbiga Vänsterpartiet ayaa arrintas dhaleeceysan iyada oo uu xisbiga ka horyimid qaybo ka mid ah tallooyinka uu soo jeediyey guddiga arrimaha caymiska ee baarlamaanka Sweden.
Ali Esbati waxuu xisbiga Vänsterpartiet u qaabilsan yahay siyaasadda arrimaha shaqada, waxuuna doonayaa in meesha laga saarom xadidaada caymiska shaqada iyo in la kordhiyo waqtiga caymiska shaqo la’aanta uu ruuxa ku qornaan karo.
"Nasiib xumo guddigam ma soo bandhigin hindisiyaan wanaagsan. Waxaa jira tillaabooyin yaryar oo horey loo qaaday, laakiin guud ahaan arrimo badan oo xal u baahnaa waxba guddigaan kamo qaban#, ayuu yeri Ali esbati.